बिपीको १०५औँ जन्मजयन्ती स्याङजाका ११ वटै तहमा मनाईयो ।।
वालिङ २४ भाद्र ।
१०५ औ बिपी जयन्ती तथा जिल्ला सभापती स्व कमल प्रसाद पंगेनीको शोक सभा
स्याङजा जिल्लाका ११ वटै वडामा मनाइएको छ । जिल्लाका ९७ वडामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको कागे्रस स्याङजाले जनाएको छ ।
यसैबीच यता बिपि विचार समाजद्धारा वालिङ ८ विपिचोकमा समेत एक कार्यक्रममा साथ बिपि जयन्ती तथा स्व. पंगेनीको श्रद्धान्जली कार्यक्रम गरीएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै महासमिति सदस्य भोजराज अर्यालले कागे्रसले विपिको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नर्गदा पार्टीमा गुटउपगुटको सृजना भईरहको भन्दै गुटबादको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा दिपक लम्साल, यामप्रसाद अधिकारी, विश्वास लम्साल, सरस्वति बगाले, भुवनेश्वर लामिछाने शेषकान्त अर्याल, नरप्रसाद पौडेल, राजेन्द्र अर्याललगायतले बोल्नुभएको छ । नेत्रप्रसाद पाण्डेको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत रामचन्द्र काफ्ले र सञ्चालन भिमप्रसाद पंगेनीले गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच बिपिको १०५औँ जन्मजयन्ती एवं कागे्रस स्याङजाका जिल्ला सभापति स्व.कमल पंगेनीको श्रद्धान्जली सभा आज वालिङ नगरपालिकाको १४ वटै वडामा गरीएको छ । यसैबीच वडा नं. ४ मा भएको कार्यक्रममा बोल्दै महाधिवेसन प्रतिनिधि गोविन्द कर्मचार्यले बिपिको विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै पाटी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले स्व. पंगेनी स्याङजाको एक धरोहर रहेको भन्दै उहाँको सपना पुरा गर्न समेत कागे्रस पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा साविक क्षेत्र नं. २ का सचिव नरबहादुर पौडेल, नेविसंघका नगरसभापति दिक्षान्तप्रताप खांण, रमेश पौडेललगायतले विपि तथा पंगेनीको चर्चा गर्नुभएको थियो । वडा सभापति हरिकिसन गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत साविक ४ उपसभापति रुकबहादुर क्षेत्रि र सञ्चालन सत्तबहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच उता भीरकोट नगरपालिका ७ मा समेत विपि जयन्ती तथा स्व. पंगेनीको श्रद्धान्जली कार्यक्रम गरीएको छ । कार्यक्रममा कागे्रसका पुर्व क्षेत्रिय सभापात लोकनाथ अर्यालले कागे्रसलाई बलियो बनाउन महामानव विपिको सिद्धान्तलाई नै आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रतिनिधि भोजिन्द्र थापा, गुप्तबहादुर केसी, केशरबहादुर खत्री, दरुणदलका वडा सदस्य केशरबहादुर केसी, मन्जु राना, चुडामणी शर्मालगायतले बोल्नुभएको थियो । भविश्वर कोईरालाकोे सभपातित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वगत देवप्रसाद अर्याल र सञ्चालन चोलाकान्त अर्यालले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा निर्माणाधिक वडा कार्यालय भवन परिसर पाङछाङमा वृक्षारोपण गरिएको छ ।
त्यस्तै उता भीरकोट नगरपालिका ४ छाङछाङदीमा समेत विपिको जयन्ती तथा पंगेनीको श्रद्धान्जली कार्यक्रम गरीएको छ । कार्यक्रममा भुपू सैनिक संघका जिल्ला अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीले महामानव विपि र स्व. पंगेनीप्रति सच्चा श्रद्धान्जलीका लागी कागे्रस बलियो हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संघीय संघका प्रतिनिधि सदस्य तथा सार्वजानिक मावि मालुङगाका प्रअ गोपालप्रसाद भट्टराई, त्रियाशिल सदस्य नरबहादुर राना, रत्नबहादुर श्रेष्ठ, डिल्लीराज कोईरालालगायतले बोल्नुभएको थियो । टंकप्रसाद श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन शोभाकान्त पौडेल र स्वागत खेमबहादुर थापाले गर्नुभएको थियो ।
यता वालिङ ३ मझकोटमा समेत कार्यक्रम गरी बिपि जयन्ती तथा स्व पंगेनीको श्रद्धान्जली कार्यक्रम गरीएको छ । कार्यक्रममा भोजराज गुरुङ, तरण दलका पुर्व केन्द्रिय सदसय गोविन्द पंगेनी, प्रेमकुमार काफ्लेलगायतले विपि र स्व. पंगेनीको योगदानका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । वडा अध्यक्ष शुकराज गुरुङको स्वागतसंगै शुरु भएको कार्यक्रम ढालबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन कौबहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै वालिङ ९ मा गरिएको कार्यक्रममा पुर्व क्षेत्रि सभापति अमरलाल कर्मचार्यले वतर्मान परिस्थितिमा कागे्रस जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा शिक्षक संघका क्षेत्रि अध्यक्ष डण्डपाणी पंगेनी, कागे्रसका पुर्व जिल्ला सदस्य विद्या श्रेष्ठलगायतले बोल्नुभएको थियो । कृष्णप्रसाद पंगेनीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागम यमकान्त गैह्रे र सञ्चालन सन्देश लम्सालले गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै भीरकोट ६ मा समेत एक कार्यक्रम री विपि तथा पंगेनीलाई सम्झना गरीएको छ । कार्यक्रममा महाधिवेसन प्रतिनिधि तथा युवा नेता विष्णु पौडेलले विपिको विचार अनुसार अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै कागे्रसीजनहरु एकताको शुत्रमा बाधिँनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला संघकी सुनिता उच्चै, तरुण सागर कुँवर, बद्रीप्रसाद अर्याल, गोविन्द तिवारी, लिलाप्रसाद रेग्मी, कमलकान्त रेग्मीलगायतले बोल्नुभएको थियो । हिमबहादुर खत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत एकनारायण रेग्मी, र सञ्चालन हरिप्रसाद अर्यालले गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच उता भीरकोट ३ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भीरकोट कालिका मन्दिर क्षेत्रमा रुद्राक्षका विरुवाहरु रोपण गरी विपि स्मृति तथा स्व. पंगेनीप्रति श्रद्धान्जली गरिएको छ । कार्यक्रममा नगरप्रमुख छायाराम खनालले भीरकोट नगरलाई समृद्ध र स्वच्छ नगर बनाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा यामप्रसाद अधिकारीले समेत आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो । महाधिवेसन प्रतिनिधि गोविन्द कर्मचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत विष्णुमाया काफ्ले र सञ्चालन एसिवशरण महतले गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै उता वालिङ ११ का भौभकामा समेत कार्यक्रम गरीएको छ । कार्यक्रममा महाधिवेसन प्रतिनिधि नसिविदिन मिँया, नरेन्द्र पराजुली, आनन्दकुमार खांण, दिलिपप्रकाश पराजुली, चोलकान्त पौडेल, अरुणा झेँडीमगरलगायतले विपिको योगदानका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । टिकाराम पंगेनीको सभपातित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममो सञ्चालन सुरेश अर्याल र स्वागत हरिहर पंगेनीले गर्नुभएको थियो ।
यस्तै वालिङ १३ मा समेत विपि जयन्ती तथा स्व. पंगेनीको श्रद्धान्जली कार्यक्रम गरीएको छ । कार्यक्रममा क्षेत्रिय सचिव दामोदर लम्सालले विपिको विचार र सिद्धान्त आत्मसाथ गर्दै कागे्रस पार्टी तथा सिंगो मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा गोपालप्रसाद गैह्रे, हेमप्रकाश गैह्रे, देविलाल गैह्रे, भिमप्रासद गैह्रे, कृष्णप्रसाद गैह्रे, लिलाबल्लब पाठक, रामप्रसाद पाठक, भेषराज गैह्रे, कमल गैह्रे, दुर्गाप्रसाद पाठकलगायतले बोल्नुभएको थियो । चण्डीप्रसाद पाठकको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत बेनूप्रसाद पाठक र सञ्चालन बालप्रसाद डुम्रेले गर्नुभएको थियो ।